စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်သူတွေကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်ကနေ တဆင့် ဘယ်လို ထောက်လှန်းနိုင်တယ် ဆိုတာကို အမေရိကန်နိုင်ငံက IT နည်းပညာရှင် ဦး Stanley ဇေယျက ပြောပြပေးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်တပ်က ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ အာဏာသိမ်းခဲ့ချိန်ကစပြီးဒီအာဏာသိမ်းမှုကို ပြည်သူတွေကလည်း နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆန့်ကျင်သူတွေကို စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရာမှာ ကွန်ပြူတာ အင်တာနက်ကနေ တဆင့် ဘယ်လို ထောက်လှန်းနိုင်တယ် ဆိုတာကို အမေရိကန်နိုင်ငံက IT နည်းပညာရှင် ဦး Stanley ဇေယျက ပြောပြပေးမှာပါ။
ဦး Stanley ဇေယျ။. ။အင်တာနက်နဲ့ ထောက်လှန်းတဲ့နေရာမှာ နည်းတွေ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ သူတို့ အင်တာနက်ကို ကန့်သတ်ချက်တွေ လုပ်ထားပြီးတော့ censorship ဆင်ဆာ လုပ်ထားပြီးတော့ ထောက်လှန်းတာတွေရှိတယ်။ အခု ဒီမှာ သူတို့ လက်ရှိ သုံးနေတာ။ နောက်ပြီးတော့ ပရိုဂရမ် ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ သုံးပြီးတော့ ထောက်လှန်းတဲ့ဟာတွေ ရှိတယ်။
နောက်ပြီးတော့ ရုရှားက အမြဲတမ်း လုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ သူတို့လည်း ရုရှားမှာ ပညာသင်ထားတဲ့ သူတွေ စစ်တပ်က ရှိတာပေါ့။ အဲဒါက ဆိုရှယ်အင်ဂျင်းနီးယားရင်း social engineering လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒါမျိုး နည်းပညာတွေ သုံးပြီးတော့ ပြည်သူတွေကို လိုက်ပြီးဖမ်းဆီးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ အခု လောလောဆယ်မှာ ပေါ့နော်။
မေး။. ။အဲဒီ ဆိုရှယ်အင်ဂျင်းနီးယားရင်း (လူမှုမီဒီယာကနေ တဆင့် ) ကနေပြီး ထောက်လှန်းတာလေးတွေ ပြောပြပေးပါ။ နဲနဲ အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့။
ဖြေ။. ။ဟုတ်ကဲ့။ ဆိုရှယ်အင်ဂျင်းနီးယားရင်းနဲ့ ထောက်လှန်းတဲ့ နည်းပညာတွေက အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။ ဘယ်လိုပြောမလဲ ဆိုတော့ ဆိုရှယ်ပရိုဖိုင်းတွေ ကနေ တဆင့် လုပ်တာ ရှိတယ်။ ဖုံးနံပါတ်ကနေ တဆင့် လုပ်လို့ရတာရှိတယ်။ နေရပ်လိပ်စာတွေကနေ တဆင့် လုပ်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီးသူ့သူငယ်ချင်း အသိုင်းဝိုင်းတွေကနေ လုပ်လို့ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူဝါသနာပါတာကနေတဆင့်၊ သူစားတဲ့ ထမင်းတို့လို က နေတဆင့်identified လုပ်ပြီးတော့ အချက်အလက်တွေကို စုဆောင်းပြီးတော့ အဲဒီလူကို လိုက်ရှာတဲ့ စံနစ်မျိုး ပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမျိုး ဟာတွေသူတို့ သုံးတယ်။
မြန်မာပြည်မှာကတော့ နဲနဲ လူဦးရေက နည်းတော့ ပိုပြီးတော့တောင် လွယ်မှာ။ ပိုပြီးတော့ လွယ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ် ပေါ့နော်။ ဆိုရှယ် အင်ဂျင်းနီးယားရင်း ဆိုရင် တနည်းအားဖြင့် ပြောရင် ဥပမာ ဆိုရှယ် မီဒီယာကနေ အကောင့် နံမယ်တွေသိရမယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဆိုတာ တခုထဲက မဟုတ်ပါဘူး။ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာတို့ တွစ်တာမှာတို့မှာ။ အဲဒီနေရာတွေက ဆိုရှယ် ပရိုဖိုင်းတွေကို သူတို့ collect လုပ်ပြီးတော့ ထောက်လှန်းတာပါ။
လူတယောက်က ပိုစ် တခု ရေးပြီဆိုရင် အရမ်း ဂရုစိုက်ရပါတယ်။ လုံခြုံမှု အတွက်ပေ့ါနော်။ VPN သုံးပြီး ရေးရတာတို့ဘာတို့ပေါ့။ အဲဒီ VPN မသုံးဘူး ဆိုရင် အဲဒါမျိုးတွေကို သူတို့ အလွယ်တကူ ရှာပြီးတော့ သူတို့ဘယ်နားကနေ ပို့စ် လုပ်တယ်။ ဘယ်နားကနေ ဗီဒီယို ရိုက်တယ်။ ဘယ်နားကနေ live လွှင့်နေတယ် ဆိုတာက အစ သူတို့ ထောက်လှန်းတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ သုံးလို့ရတယ်။ နောက်ပြီး ဆိုရှယ် အင်ဂျင်းနီးယားရင်း နည်းပညာတွေ သုံးပြီးတော့ သူတို့ လိုက်ပြီး ဖမ်းလို့ရတယ်။ အခုလည်း သူတို့ အဲဒါကို သုံးနေတာပါပဲ။
မေး။. ။ အဲဒီလို လူမှုမီဒီယာကတဆင့် ဆိုရှယ်အင်ဂျင်နီယာနည်းနဲ့ ထောက်လှန်းတာ ကို ဘယ်လို ရှောင်နိုင်လဲ ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။. ။ အဲဒီဟာမျိုးတွေကို ရှောင်ဖို့ အတွက်ကလည်း အဓိကကတော့ ကိုယ်သုံးရမယ့်၊ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဆိုရှယ် ပရိုဖိုင်းတွေမှာ တခု ရေးမယ်။ တင်မယ်။ ရိုက်မယ်။ live လွှင့်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကိုယ်က အဓိက ကိုယ်သုံးမယ့်ဟာက တင်သင့်တဲ့ဟာလား။ share လုပ်သင့်တဲ့ဟာလား မလုပ်သင့်တဲ့ဟာလား အဲဒါတွေကို စဉ်းစားရင်တော့ ပိုကောင်းတာ ပေါ့လေ။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ် အင်တာနက် သုံးးနေပြီ ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာနက်ကို သူတို့ထောက်လှန်းတာ ကနေလွတ်အောင် ကိုယ်က - ဥပမာ ဒီကနေ့ပေါ်နေတဲ့ VPN လိုဟာမျိုးတို့ browser ဆိုရင် duckduck go တို့ onion တို့ အဲဒီလို ဘရောင်ဇာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေ သုံးပြီးတော့ အင်တာနက်ပေါ် တက်တာက အစ သတိထားရပါမယ်။
နောက်ပြီးတော့ ခုနပြောသလို ကိုယ့်ရဲ့ ဖုံးနံပတ်ကို အလွယ်တကူ group ထဲမှာ share လုပ်တာတို့။ အဲဒီ အီးမေးလ် လိပ်စာကို ရှယ်လုပ်တာတို့၊ အဲဒါတွေ သတိထားရပါမယ်။
အခုဒီမှာ ကျနော်တို့ လက်တွေ့ သုံးနေတာ ဆိုရင် တော်တော်ကောင်းတယ်။ ဥပမာ Maltego software ဆိုရင် ဆိုရှယ်အင်ဂျင်းနီးယားရင်းကို identify လုပ်တဲ့ maltigo ဆိုရင် လူတယောက်ရဲ့ ပရိုဖိုင်းကို ဆွဲပြီးတော့ scan လုပ်လိုက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အဲဒီလူရဲ့ အင်ဖေါ်မေးရှင်းအားလုံး အပြင် အဲဒီလူနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လူအားလုံးရဲ့ အင်ဖေါ်မေးရှင်းကိုပါ အားလုံး map နဲ့ ပေါ်လာတယ်။
အင်ဖေါ်မေးရှင်း။ အဲဒီတော့ အဲဒါတွေကို စုစုပြီးတော့ လိုက်လို့ရတယ်။ identify လုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒါကတော့ ဆိုရှယ် အင်ဂျင်းနီးယားရင်းကို သုံးပြီးတော့ ထောက်လှန်းတယ်။ လိုက်လံဖမ်းဆီးမယ်၊ အဲဒါတွေ လုပ်နိုင်တယ်။
အဲဒီတော့ ဆိုရှယ်အင်ဂျင်းနီးယားရင်းနဲ့ ဥပမာ တခု ပြောရရင် ဥပမာပြောရရင် တရုတ်က ထုတ်တဲ့ TikTok လို software မျိုး။ အဲဒါမျိုးတွေက သူတို့ ဆော့ဖ်ဝဲ ထဲမှာကို သူတို့က surveillance လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းတွေ ပါတယ်။ အဲဒီ TikTok ရဲ့ backend မှာ ပေါ့နော်။
နောက် တခုက ကျတော့ သူတို့ အမေရိကန်ကနေ တရားမဝင် ဝယ်ယူထားတဲ့ အောက်ဆီဂျင် forensic software လိုဟာမျိုး ပေါ့နော်။အဲဒါကို သူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရယ်၊ စစ်တပ်ရယ်မှာ ကောင်းကောင်း အသုံးချနေတယ်။
မေး။. ။ ဒီ ဆော့ဖ်ဝဲနဲ့ ဘယ်လို တိုက်ခိုက်လည်း ပြောပြပေးပါ။
ဖြေ။. ။ဟို အောက်ဆီဂျင် Forensic ဆိုရင် သူက social engineering နည်းနဲ့ သုံးတာ မဟုတ်ဖူး။ ဒါပေမယ့် အခုလို ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေ၊ အဖမ်းခံရတဲ့ သူတွေမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဖုံးတွေရဲ့ data အချက်အလက်တွေကို ထုတ်ယူတဲ့ data extraction tool လို့ခေါ်တယ်။ device တွေ အားလုံးပေါ့နော်။ ကွန်ပြူတာ လက်တော့ပ် ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်ကိုပဲ သွားပြီး ဖမ်းဖမ်း သူတို့မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ digital device တွေ အားလုံးက အ ချက်အလက်တွေကို သူက ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ မျိုးပါ။ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲပါ။အဲဒါတွေကို သုံးပြီးတော့ သူတို့က အချက်အလက်တွေကို စုစည်းပြီးတော့ သူတို့ ဆက်စပ်ပြီး တော့ ယူပြီးတော့ အဲဒီလိုလိုက်ဖမ်းတာပါ။
မေး။ ။ဒီလို ထောက်လှန်းတဲ့နေရာမှာ တခြားဘာ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ သုံးပါသေးသလဲ။
ဖြေ။ ။ဆော့ဖ်ဝဲ တွေကတော့ သုံးလို့ရတာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တရုတ်က ထုတ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ ဖြစ်မယ်။ တကယ်တော့ သူတို့က ဆော့ဖ်ဝဲတောင် ကောင်းကောင်း သုံးစရာ မလိုပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့က သူတို့ရဲ့ gateway ကနေ တယ်လီဖုံးကနေ ဖြတ်သွားတာ ဆိုတော့ အဲဒီ တယ်လီကွန်းရဲ့ administration စီမံခန့်ခွဲမှု ပေါ့နော်။ အဲဒီ backend administration မှာ ကိုက တော်တော်များများ အင်ဖေါ်မေးရှင်း ရပြီးသား။ အင်ဖေါ်မေးရှင်း ပါပြီးသား ဆိုတော့ ဘယ်သူ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိပ်စာ address နဲ့ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ ကြည့်လို့ ရပါတယ်။
ကြည့်လို့ရတယ် ဆိုတာက မြန်မာနိုင်ငံက privacy မှာ တခြားနိုင်ငံတွေထက် အများကြီး နိမ့်ကျသေးတာကိုး။ privacy ဆိုတာက မရှိသလောက် ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ အခု လက်ရှိ အော်ရီဒူးတို့. MPT တို့မှာ သူတို့ရဲ့ telecom management software တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက အော်တိုမက်တစ် user management မှာ သူတို့ အကုန်လုံး အင်ဖေါ်မေးရှင်းတွေ ပါပြီးသား။ ပါပြီးသား ဆိုတော့ ဘယ်နေရာကနေ ဘယ်လိုခေါ်တယ်။ ဘယ်နှစ်ခု။ ဘယ် endpoint ကနေ ဘယ် endpoint ကိုသူတို့ connect လုပ်နေတယ်။ ဆက်နေတယ်။ ဆိုတာ သူတို့ identify လုပ်လို့ရတယ်။dot တွေကို သူတို့ ဆက်လို့ရတယ်။ အဲဒါတွေက တယ်လီကွန်းနဲ့ ဆိုင်တာတွေ ပေါ့နော်။
အဲဒီတော့ အင်တာနက် ISP ဆိုလည်း ဂိတ်ဝေး ဆိုလည်း ဒီလိုပဲ။ gateway မှာ ဆို gateway management software တွေ။ software တခုထဲ မဟုတ်ဖူး၊ software – hardware – router အဲလိုမျိုးတွေပေ့ါ။ အဲဒါမျိုးတွေကို သူတို့ရ US က ရယူထားတာ ရှိတယ်။ ဒီ သူတို့ အာဏာမသိမ်းခင်ကရယူထားတာ ရှိတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ သုံးလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ တော်တော် ကောင်းစရာတောင် မလိုပါဘူး။
အိုင်တီနည်းပညာရှင်ဦး Stanley ဇေယျ ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈတပျက ဖဖေျေါဝါရီလ ၁ အာဏာသိမျးခဲ့ခြိနျကစပွီး ဒီအာဏာသိမျးမှုကို ပွညျသူတှကေလညျး နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဆနျ့ကငျြသူတှကေို စဈတပျကဖမျးဆီးနိုငျဖို့ ကွိုးစားရာမှာ ကှနျပွူတာ အငျတာနကျကနေ တဆငျ့ ဘယျလို ထောကျလှနျးနိုငျတယျ ဆိုတာကို အမရေိကနျနိုငျငံက IT နညျးပညာရှငျ ဦး Stanley ဇယေကြ ပွောပွပေးမှာပါ။
ဦး Stanley ဇယြေ။. ။အငျတာနကျနဲ့ ထောကျလှနျးတဲ့နရောမှာ နညျးတှေ အမြိုးမြိုး ရှိတယျ။ သူတို့ အငျတာနကျကို ကနျ့သတျခကျြတှေ လုပျထားပွီးတော့ censorship ဆငျဆာ လုပျထားပွီးတော့ ထောကျလှနျးတာတှရှေိတယျ။ အခု ဒီမှာ သူတို့ လကျရှိ သုံးနတော။ နောကျပွီးတော့ ပရိုဂရမျ ဆော့ဖျဝဲ တှေ သုံးပွီးတော့ ထောကျလှနျးတဲ့ဟာတှေ ရှိတယျ။
နောကျပွီးတော့ ရုရှားက အမွဲတမျး လုပျတဲ့ဟာတှပေေါ့နျော။ သူတို့လညျး ရုရှားမှာ ပညာသငျထားတဲ့ သူတှေ စဈတပျက ရှိတာပေါ့။ အဲဒါက ဆိုရှယျအငျဂငျြးနီးယားရငျး social engineering လို့ချေါတယျ။ အဲဒါမြိုး နညျးပညာတှေ သုံးပွီးတော့ ပွညျသူတှကေို လိုကျပွီးဖမျးဆီးနတော တှရေ့ပါတယျ။ အခု လောလောဆယျမှာ ပေါ့နျော။
မေး။. ။အဲဒီ ဆိုရှယျအငျဂငျြးနီးယားရငျး (လူမှုမီဒီယာကနေ တဆငျ့ ) ကနပွေီး ထောကျလှနျးတာလေးတှေ ပွောပွပေးပါ။ နဲနဲ အကယျြခြဲ့ပွီးတော့။
ဖွေ။. ။ဟုတျကဲ့။ ဆိုရှယျအငျဂငျြးနီးယားရငျးနဲ့ ထောကျလှနျးတဲ့ နညျးပညာတှကေ အမြိုးမြိုး ရှိတယျ။ ဘယျလိုပွောမလဲ ဆိုတော့ ဆိုရှယျပရိုဖိုငျးတှေ ကနေ တဆငျ့ လုပျတာ ရှိတယျ။ ဖုံးနံပါတျကနေ တဆငျ့ လုပျလို့ရတာရှိတယျ။ နရေပျလိပျစာတှကေနေ တဆငျ့ လုပျလို့ရတယျ။ နောကျပွီးသူ့သူငယျခငျြး အသိုငျးဝိုငျးတှကေနေ လုပျလို့ရတယျ။ နောကျပွီးတော့ သူဝါသနာပါတာကနတေဆငျ့၊ သူစားတဲ့ ထမငျးတို့လို က နတေဆငျ့identified လုပျပွီးတော့ အခကျြအလကျတှကေို စုဆောငျးပွီးတော့ အဲဒီလူကို လိုကျရှာတဲ့ စံနဈမြိုး ပေါ့နျော။ အဲဒီလိုမြိုး ဟာတှသေူတို့ သုံးတယျ။
မွနျမာပွညျမှာကတော့ နဲနဲ လူဦးရကေ နညျးတော့ ပိုပွီးတော့တောငျ လှယျမှာ။ ပိုပွီးတော့ လှယျတယျလို့ ကနြျောတို့ ယူဆတယျ ပေါ့နျော။ ဆိုရှယျ အငျဂငျြးနီးယားရငျး ဆိုရငျ တနညျးအားဖွငျ့ ပွောရငျ ဥပမာ ဆိုရှယျ မီဒီယာကနေ အကောငျ့ နံမယျတှသေိရမယျ။ ဆိုရှယျမီဒီယာ ဆိုတာ တခုထဲက မဟုတျပါဘူး။ ဖစျေ့ဘုတျမှာတို့ တှဈတာမှာတို့မှာ။ အဲဒီနရောတှကေ ဆိုရှယျ ပရိုဖိုငျးတှကေို သူတို့ collect လုပျပွီးတော့ ထောကျလှနျးတာပါ။
လူတယောကျက ပိုဈ တခု ရေးပွီဆိုရငျ အရမျး ဂရုစိုကျရပါတယျ။ လုံခွုံမှု အတှကျပေ့ါနျော။ VPN သုံးပွီး ရေးရတာတို့ဘာတို့ပေါ့။ အဲဒီ VPN မသုံးဘူး ဆိုရငျ အဲဒါမြိုးတှကေို သူတို့ အလှယျတကူ ရှာပွီးတော့ သူတို့ဘယျနားကနေ ပို့ဈ လုပျတယျ။ ဘယျနားကနေ ဗီဒီယို ရိုကျတယျ။ ဘယျနားကနေ live လှငျ့နတေယျ ဆိုတာက အစ သူတို့ ထောကျလှနျးတဲ့ ဆော့ဖျဝဲ တှေ သုံးလို့ရတယျ။ နောကျပွီး ဆိုရှယျ အငျဂငျြးနီးယားရငျး နညျးပညာတှေ သုံးပွီးတော့ သူတို့ လိုကျပွီး ဖမျးလို့ရတယျ။ အခုလညျး သူတို့ အဲဒါကို သုံးနတောပါပဲ။
မေး။. ။ အဲဒီလို လူမှုမီဒီယာကတဆငျ့ ဆိုရှယျအငျဂငျြနီယာနညျးနဲ့ ထောကျလှနျးတာ ကို ဘယျလို ရှောငျနိုငျလဲ ပွောပွပေးပါ။
ဖွေ။. ။ အဲဒီဟာမြိုးတှကေို ရှောငျဖို့ အတှကျကလညျး အဓိကကတော့ ကိုယျသုံးရမယျ့၊ ကိုယျသုံးနတေဲ့ ဆိုရှယျ ပရိုဖိုငျးတှမှော တခု ရေးမယျ။ တငျမယျ။ ရိုကျမယျ။ live လှငျ့မယျ ဆိုလို့ရှိရငျ ကိုယျက အဓိက ကိုယျသုံးမယျ့ဟာက တငျသငျ့တဲ့ဟာလား။ share လုပျသငျ့တဲ့ဟာလား မလုပျသငျ့တဲ့ဟာလား အဲဒါတှကေို စဉျးစားရငျတော့ ပိုကောငျးတာ ပေါ့လေ။ နောကျပွီးတော့ ကိုယျ အငျတာနကျ သုံးးနပွေီ ဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့ အငျတာနကျကို သူတို့ထောကျလှနျးတာ ကနလှေတျအောငျ ကိုယျက - ဥပမာ ဒီကနပေ့ျေါနတေဲ့ VPN လိုဟာမြိုးတို့ browser ဆိုရငျ duckduck go တို့ onion တို့ အဲဒီလို ဘရောငျဇာတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲဒါတှေ သုံးပွီးတော့ အငျတာနကျပျေါ တကျတာက အစ သတိထားရပါမယျ။
နောကျပွီးတော့ ခုနပွောသလို ကိုယျ့ရဲ့ ဖုံးနံပတျကို အလှယျတကူ group ထဲမှာ share လုပျတာတို့။ အဲဒီ အီးမေးလျ လိပျစာကို ရှယျလုပျတာတို့၊ အဲဒါတှေ သတိထားရပါမယျ။
အခုဒီမှာ ကနြျောတို့ လကျတှေ့ သုံးနတော ဆိုရငျ တျောတျောကောငျးတယျ။ ဥပမာ Maltego software ဆိုရငျ ဆိုရှယျအငျဂငျြးနီးယားရငျးကို identify လုပျတဲ့ maltigo ဆိုရငျ လူတယောကျရဲ့ ပရိုဖိုငျးကို ဆှဲပွီးတော့ scan လုပျလိုကျပွီ ဆိုတာနဲ့ အဲဒီလူရဲ့ အငျဖျေါမေးရှငျးအားလုံး အပွငျ အဲဒီလူနဲ့ ဆကျစပျတဲ့ လူအားလုံးရဲ့ အငျဖျေါမေးရှငျးကိုပါ အားလုံး map နဲ့ ပျေါလာတယျ။
အငျဖျေါမေးရှငျး။ အဲဒီတော့ အဲဒါတှကေို စုစုပွီးတော့ လိုကျလို့ရတယျ။ identify လုပျလို့ရတယျ။ အဲဒါကတော့ ဆိုရှယျ အငျဂငျြးနီးယားရငျးကို သုံးပွီးတော့ ထောကျလှနျးတယျ။ လိုကျလံဖမျးဆီးမယျ၊ အဲဒါတှေ လုပျနိုငျတယျ။
အဲဒီတော့ ဆိုရှယျအငျဂငျြးနီးယားရငျးနဲ့ ဥပမာ တခု ပွောရရငျ ဥပမာပွောရရငျ တရုတျက ထုတျတဲ့ TikTok လို software မြိုး။ အဲဒါမြိုးတှကေ သူတို့ ဆော့ဖျဝဲ ထဲမှာကို သူတို့က surveillance လုပျလို့ရတဲ့ နညျးလမျးတှေ ပါတယျ။ အဲဒီ TikTok ရဲ့ backend မှာ ပေါ့နျော။
နောကျ တခုက ကတြော့ သူတို့ အမရေိကနျကနေ တရားမဝငျ ဝယျယူထားတဲ့ အောကျဆီဂငျြ forensic software လိုဟာမြိုး ပေါ့နျော။ အဲဒါကို သူတို့ရဲတပျဖှဲ့ရယျ၊ စဈတပျရယျမှာ ကောငျးကောငျး အသုံးခနြတေယျ။
မေး။. ။ ဒီ ဆော့ဖျဝဲနဲ့ ဘယျလို တိုကျခိုကျလညျး ပွောပွပေးပါ။
ဖွေ။. ။ဟို အောကျဆီဂငျြ Forensic ဆိုရငျ သူက social engineering နညျးနဲ့ သုံးတာ မဟုတျဖူး။ ဒါပမေယျ့ အခုလို ဆန်ဒပွတဲ့သူတှေ၊ အဖမျးခံရတဲ့ သူတှမှော ကနျြခဲ့တဲ့ ဖုံးတှရေဲ့ data အခကျြအလကျတှကေို ထုတျယူတဲ့ data extraction tool လို့ချေါတယျ။ device တှေ အားလုံးပေါ့နျော။ ကှနျပွူတာ လကျတော့ပျ ပဲ ဖွဈဖွဈ ၊ အိမျကိုပဲ သှားပွီး ဖမျးဖမျး သူတို့မှာ ကနျြခဲ့တဲ့ digital device တှေ အားလုံးက အ ခကျြအလကျတှကေို သူက ဆှဲထုတျလိုကျတဲ့ ဆော့ဖျဝဲ မြိုးပါ။ တျောတျောကောငျးပါတယျ။ တျောတျောကောငျးတဲ့ ဆော့ဖျဝဲပါ။ အဲဒါတှကေို သုံးပွီးတော့ သူတို့က အခကျြအလကျတှကေို စုစညျးပွီးတော့ သူတို့ ဆကျစပျပွီး တော့ ယူပွီးတော့ အဲဒီလိုလိုကျဖမျးတာပါ။
မေး။ ။ဒီလို ထောကျလှနျးတဲ့နရောမှာ တခွားဘာ ဆော့ဖျဝဲတှေ သုံးပါသေးသလဲ။
ဖွေ။ ။ဆော့ဖျဝဲ တှကေတော့ သုံးလို့ရတာ အမြားကွီး ရှိပါတယျ။ တရုတျက ထုတျတဲ့ ဆော့ဖျဝဲ တှေ ဖွဈမယျ။ တကယျတော့ သူတို့က ဆော့ဖျဝဲတောငျ ကောငျးကောငျး သုံးစရာ မလိုပါဘူး။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ သူတို့က သူတို့ရဲ့ gateway ကနေ တယျလီဖုံးကနေ ဖွတျသှားတာ ဆိုတော့ အဲဒီ တယျလီကှနျးရဲ့ administration စီမံခနျ့ခှဲမှု ပေါ့နျော။ အဲဒီ backend administration မှာ ကိုက တျောတျောမြားမြား အငျဖျေါမေးရှငျး ရပွီးသား။ အငျဖျေါမေးရှငျး ပါပွီးသား ဆိုတော့ ဘယျသူ ဘယျနရောကနေ ဘယျလိပျစာ address နဲ့ လုပျနတေယျ ဆိုတာ ကွညျ့လို့ ရပါတယျ။
ကွညျ့လို့ရတယျ ဆိုတာက မွနျမာနိုငျငံက privacy မှာ တခွားနိုငျငံတှထေကျ အမြားကွီး နိမျ့ကသြေးတာကိုး။ privacy ဆိုတာက မရှိသလောကျ ပဲ ဖွဈနတေယျ။ အဲဒီတော့ အခု လကျရှိ အျောရီဒူးတို့. MPT တို့မှာ သူတို့ရဲ့ telecom management software တှေ ရှိပါတယျ။ အဲဒါတှကေ အျောတိုမကျတဈ user management မှာ သူတို့ အကုနျလုံး အငျဖျေါမေးရှငျးတှေ ပါပွီးသား။ ပါပွီးသား ဆိုတော့ ဘယျနရောကနေ ဘယျလိုချေါတယျ။ ဘယျနှဈခု။ ဘယျ endpoint ကနေ ဘယျ endpoint ကိုသူတို့ connect လုပျနတေယျ။ ဆကျနတေယျ။ ဆိုတာ သူတို့ identify လုပျလို့ရတယျ။ dot တှကေို သူတို့ ဆကျလို့ရတယျ။ အဲဒါတှကေ တယျလီကှနျးနဲ့ ဆိုငျတာတှေ ပေါ့နျော။
အဲဒီတော့ အငျတာနကျ ISP ဆိုလညျး ဂိတျဝေး ဆိုလညျး ဒီလိုပဲ။ gateway မှာ ဆို gateway management software တှေ။ software တခုထဲ မဟုတျဖူး၊ software – hardware – router အဲလိုမြိုးတှပေေ့ါ။ အဲဒါမြိုးတှကေို သူတို့ရ US က ရယူထားတာ ရှိတယျ။ ဒီ သူတို့ အာဏာမသိမျးခငျက ရယူထားတာ ရှိတယျ။ ဆိုတော့ သူတို့ သုံးလို့ရပါတယျ။ ဆိုတော့ တျောတျော ကောငျးစရာတောငျ မလိုပါဘူး။
အိုငျတီနညျးပညာရှငျ ဦး Stanley ဇယြေ ရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။